कोरोना संक्रमित बालबालिका उपचारका लागि विराट अस्पतालमा विशेष कोभिड वार्ड – Health Post Nepal
बालरोग विशेषज्ञ डा. हेमसागर रिमाल
कोरोना भाइरसको महामारीबाट ठूलो संख्यामा बालबालिकासमेत प्रभावित हुन थालेपछि विराटनगरस्थित विराट मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले बाल कोभिड वार्ड बनाएको छ ।
विशिष्ठीकृत बाल अस्पतालबाहेक यसरी छुट्टै बाल कोभिड वाड बनाएको संभवत पहिलो हो ।
नयाँ भेरियान्टसहितको पछिल्ला संक्रमणमा बालबालिका पनि संक्रमित हुने र जटिलता पनि बढि देखिन थालेपछि अस्पतालले यस्तो वाड बनाएको हो ।
नेपालमा पनि कुल संक्रमितको झण्डै २० प्रतिशत बालबालिका छन्।
संक्रमण दर उच्च भए पनि वयस्कलाई जस्तो बालबालिकाको उपचारका लागि निकै कमले मात्रै मात्र अस्पतालमा आइसियु सेवा छुट्ट्याइएको छ।
अस्पतालको बालरोग विभागका प्रमुख एवं बालरोग विशेषज्ञ डा. हेमसागर रिमालका अनुसार संक्रमित भएका बालबालिकामा संक्रमण र जटिलता बढेसँगै उपचार झन् जटिल बन्ने भएपछि विशेष आवश्यकता बोध अस्पतालमा बालबालिकालाई छुट्टै वाड बनाइएको बताए।
अस्पतालले तयार पारेको कोभिड बाल वार्डमा ६ शैय्या छन्। वाडमा अहिले दुई बालबालिका उपचाररत छन्।
कोभिड दोस्रो लहरमा पहिलो लहरको तुलनामा धेरै बालबालिका संक्रमित भएका छन्।
अहिले संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेका कारण बच्चाहरूमा पनि जटिलताहरु देखिन थालेका छन्।
विभिन्न अध्ययनले वयष्कहरूमा जस्तै बालबलिकामा पनि कोभिडको अल्पकालीन र दीर्घकालीन असर देखिइरहेको छ।
पहिलो लहरमा संक्रमणका कारण तत्काल उत्पन्न जटिलता, लक्षण र मृत्युदर पनि बालबालिकामा कम देखिएपछि पछिल्ला भेरियान्टले बालबालिकाका लागि उपचारको छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता बढाउँदै गएको छ।
अस्पतालले बाल वार्डमा उमेर र आवश्यकताका आधारमा बच्चाहरूको आमा वा कुरुवालाई समेत बस्नदिने व्यवस्था गरेको छ।
चिकित्सकहरुका अनुसार पछिल्ला दिनमा कोरोना संक्रमण र संक्रमणमुक्त भइसकेको अवस्थामा बच्चामा ‘मल्टिसिस्टम इन्फ्लेमेटोरी सिन्ड्रोम’ (एमआइएस–सी) देखिएको जटिल स्वास्थ्य समस्यासमेत बढ्दै गएको छ।
डा. रिमालका अनुसार वयस्कहरू कोभिडको लक्षण देखिएपछि उपचार गर्न अस्पताल जान सक्ने र अरु बिरामीसँगै बस्न सक्ने भएपनि वयस्कलक्षित वाड तथा संरचना बालबालिकामैत्री हुँदैनन्।
‘ठूला बिरामीको बीचमा लगेर राख्दा बालबालिका झन् आत्तिन्छन्। अर्कोतिर बालबालिकालाई गरिने उपचार तथा स्याहार ठूलालाई गर्ने भन्दा बेग्लै हुन्छ।’ डा. रिमालले भने।
उनले विराटले सुरु गरेको यो पहल एवं परिकल्पनालाई अरु अस्पतालले पनि अनुशरण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
बाल कोभिड वाडमा साना बच्चादेखि नवजात शिशुलाई राख्न सक्नेगरी संरचना बनाइएको छ। अहिले सुरुमा उनीहरुलाई श्वासप्रश्वासको समस्या आए वाडमा भर्ना गर्ने गरिएको छ।
कहिलेकाहीँ कोभिडबाहेकका कारणले जटिलता आएका बालबालिकलाई अन्य बिरामीसँग राख्दा झन् समस्या हुनसक्ने चिकित्सकहरु बताउँछन्।
अस्पतालले आवश्यकताको आधारमा अस्पतालको बाल आइसियु, भेन्टिलेटरसमेत प्रयोग गर्न सक्नेगरी प्रवन्ध मिलाएको छ।
वार्डमा आइसियुमा उपलब्ध सबै सुविधा व्यवस्था गरिएको छ।मोनिटर, अक्सिजन सेचुरेसन, पल्स, ब्लडप्रेसर रेगुलर मोनिटरको व्यवस्था गरिएको छ। भेन्टिलेटर चाहिने बालबालिकालाई इन्क्युबेसन, मेसिनबाट सास फेराउने जस्ता उपकरणको व्यवस्था गरिएको छ।
बाड वाडमा नर्स र मेडिकल अफिसर २४सैं घण्टा उपलब्ध गराएर समय समयमा बालरोग विशेषज्ञ, पिडियाट्रिक्स इन्टेन्सिभ केयरका लागि विशेष तालिम लिएका डाक्टर, नियोनाटोलोजिस्टको समेत निगरानीको व्यवस्था गरिएको छ।
अस्पतालले आवश्यकताअनुसार शय्या थप गर्ने पनि जनाएको छ। विषम परिस्थितिमा जनशक्ति तथा ठाउँ व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको डा. रिमालले बताए ।
वार्डबारे खासै प्रचारप्रसार नभएको कारण चाप नबढिसकेको माग बढ्दै जाँदा सेवाको दर र दायरा बढाउँदै लगिने अस्पतालले जनाएको छ।
डा. रिमाल नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको आह्वानमा देशभरका बालबालिकालाई टेलिफोन परामर्श दिने सेवासँग समेत जोडिएका छन् ।
सो सेवामार्फत् जोडिँदा एकै दिनमा सयौं अभिभावक संक्रमित बालबालिकाको स्वास्थ्य अवस्थाबारे चासो राख्ने गरेको उनी बताउँछन्।
‘परिवारै संक्रमित हुँदा बच्चाहरू पनि संक्रमित भइरहेका छन्। होम आइसोलेसनमै थुप्रै बालबालिका बसिरहेका छन्।’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कुनै पनि बालबालिकालाई अक्सिजन चाहिए वा श्वासप्रश्वासमा कठिन भए अस्पताल ल्याइहाल्नुपर्छ’
डा. रिमालका अनुसार संक्रमित बालबालिकालाई सास फेर्न गाह्रो भए, शिथिल हुँदै गए, राम्ररी खाना नखाने, शरीरिक स्थिति कमजोर भएर गएकोमा तत्काल स्वास्थ्य संस्थामा लानुपर्छ।
स्वास्थ्य जटिलता देखिएमा बालबालिकाको उपचारका लागि चिकित्सकसँग सिधै वा अस्पतालमा फोन गर्नसमेत उनले सुझाब दिए।